I-Ellavista: I-LUXE yokuhlala elunxwemeni, i-WI-FI kunye ne-Ocean VIEWS
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguVicki
Eli khaya lihle linemigangatho emibini libekwe kweyona ndawo imangalisayo: iphezulu endulini yokujonga imbonakalo yolwandle kodwa ikufutshane ngokwaneleyo elunxwemeni ukuze uhambe apho ngaphantsi kwemizuzu emihlanu!
Ixhotyiswe kakuhle kakhulu kwiintsapho kunye namaqela abahlobo, zonke iindawo zokuhlala eziphambili zikumgangatho ophezulu kwaye zijongene nolwandle. Uya kuyithanda idesika egqunyiweyo yangaphandle kunye nendawo yayo yokutyela yangaphandle, igcwele ioveni yepizza eyenziwe ngamaplanga kunye negumbi lokuphumla elangeni elikufutshane.
** AKUKHO UKUBHEKELWA KWABASHISHINI
Iimbono ezimangalisayo zolwandle
* Hamba uye elunxwemeni.
* I-Wi-fi kunye ne-oveni yepizza.
*I-air-conditioning kuyo yonke indawo.
* Igumbi lokulala kunye nelinen yokuhlambela ibandakanyiwe.
Ubume bekhaya bulungile ukuya kuthi ga kwiintsapho ezimbini. Umgangatho ongaphezulu unekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuphumla kunye negumbi lokuhlala likakumkanikazi kunye negumbi lokulala elinamawele amabini kwelinye icala lepaseji. La magumbi mabini akumgangatho ophezulu abelana ngegumbi lokuhlambela elikhulu (elikwafikelela nakwigumbi lokulala elikhulu).
Kumgangatho ongezantsi kukho amagumbi amabini okulala ngaphezulu, indawo yokuhlamba impahla kunye negumbi lokuhlambela lesibini kunye nendlu yangasese.
Kukho izitulo eziphakamileyo ezibini ezisetyenziselwa iindwendwe. Nceda uqaphele ukuba akukho ndawo inengca okanye lawn.
IKHISHI kunye ne-DINING
* Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo.
* I-oven ye-Microwave.
* Umatshini wekofu weNespresso (i-BYO pods)
* Itafile yokutyela yabantu abasi-8.
* I-BBQ yegesi ngaphandle kunye ne-oveni ye-pizza etshiswe ngamaplanga (ukusetyenziswa akuvumelekanga ngexesha lokuvalwa komlilo kunye namaxesha athile onyaka)
* Umabonwakude kunye neDVD player.
* Umlilo weenkuni.
* Iindawo zokuphumla ezikhululekileyo, iincwadi kunye nemidlalo.
AMAGUMBI X 4
* Igumbi lokulala elinye: Ibhedi enkulu (kwigumbi eliphezulu) elinegumbi lokuhlambela elikwabelwanayo.
* Igumbi lokulala ezimbini: iibhedi ezimbini ezingatshatanga (phezulu). Umoya-moya.
* Igumbi lokulala ezintathu: ezimbini ezingatshatanga (ezisezantsi). Umoya-moya.
* Igumbi lokulala lesine: Ibhedi enkulu (ezantsi) enegumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo.
EZOKUhlambela x 2
* Ishawa, amampunge aphindwe kabini, indlu yangasese (phezulu).
* Ishawa, amampunge, indlu yangasese (ezantsi).
• Umatshini wokuhlamba, umatshini wokomisa, iayini kunye nebhodi yokuayina.
* Umsonto weempahla wangaphandle.
NGAPHANDLE & YOKUPAKA
* Ifenitshala yangaphandle.
* Indawo yokupaka eyaneleyo ukuya kuthi ga kwiimoto ezintathu. Akukho kusetyenziswa kweendwendwe kwigaraji.
Chitha imini elunxwemeni, kumgama nje oyi-200m, kwaye ukonwabele ukuloba, ukuqubha, ukuntywila emanzini kunye nokuhamba ixesha elide.
Yiya kwiPaki yeNgingqi yaseMeelup yokubukela iintaka, ukuhamba ngonxweme kunye nokuqubha eMeelup Beach entle.
Yitya eEagle Bay Brewery, eMeelup Farmhouse okanye kwiWise Winery restaurants.
Hamba uyokubona iminenga kwiqonga lokubukela iminenga elikufutshane ePoint Picquet.
Ndwendwela ii-wineries ezikufutshane, abavelisi bokutya okumnandi kunye neegalari zobugcisa.
Kuninzi kakhulu ukubona nokwenza kweli cala lingasentla loMmandla weWayini weMargaret River!
Sifowunela kude ukuba uyasifuna.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$709